Abamatekisi bakhala ngomgwaqo | News24
Abamatekisi bakhala ngomgwaqo
IZITHOMBE: lethiwe makhanyaBekuvutha amalangabi kukhalwa ngomgwaqo.
Lesi siteleka besihlanganisa amalunga omphakathi, abashayeli bamatekisi kanye nabanikazi bawo amatekisi. Amatekisi abengahambi ngoMsombuluko njengoba bebevale yonke imigwaqo engenela kule ndawo.
Kweminye yemigwaqo abakhala ngayo uKhumalo, Nonkayi kanye no-Shange.
Omunye wabanikazi bamatekisi uthe yena ngeke aze asakwazi ukuthi itekisi lakhe lihambele kulezi zindawo ezisebenzisa lo mgwaqo ngoba liyafa.
“Sikhipha izimali eziningi sikhanda izimoto lezi esithutha ngazo umphakathi ngemuva kokuba zibulawe umgwaqo. Uthenga itekisi elisha manje kodwa kuthi kuphela iminyaka emibili lisuke selikhahlake laphela.Ugcina usukhipha ngisho imali yakho ephaketheni yokukhanda itekisi,” kubeka yena.
Uthe akumele engabe imoto elayisha umphakathi ihamba kule migwaqo ngoba kayikho esimeni esifanele.
“Sikhathele nathi manje ukuhamba kule migwaqo enemigodi emikhulu nemisele kanti futhi kuyingozi ukuhamba kuyona,” kubeka yena.
Imenenja yaserenki yakule ndawo, uMnu Vusi Shange, uthe okubaphatha kabi kakhulu ukuthi sekukaningi becela ukuba balungiselwe le migwaqo kodwa akukho lutho olwenzekayo.
“Sasithenjiswe ukuthi angeke uze uphele unyaka ka-2018 singalungiseliwe lemigwaqo kodwa kuze kube imanje ayikho into elungayo. Bafika abantu bakamasipala behambisana nabantu abaphuma eMnyangweni wezemiGwaqo bethi bazohlola isimo somgwaqo ukuze uzolungiswa kodwa kuze kube imanje awukakalungiswa,” kubeka yena.
Ikhansela laku lendawo neliphinde libe nguSomlomo kuMasipala uMsunduzi, uNkk Jabu Ngubo, uzifikele qathatha emphakathi lapho kade beteleka khona nalapho efika wabathembisa khona ukuthi bayalusebenza lolu daba.